Soo dejisan Process Explorer 16.32 – Vessoft
WindowsNidaamkaNadiifinta & WaxyeelayntaProcess Explorer
Bogga rasmiga ah: Process Explorer
Hanaanka Hawlaha – software wanaagsan oo loola socdo loona xakameeyo nidaamka nidaamka. Software wuxuu leeyahay daaqad aasaasi ah oo habaysan oo habraac kasta oo lagu soo bandhigo liiska soo saarey oo loo qaybiyay midabyo si ay u kala saaraan nooca. Nidaamku wuxuu bixiyaa talaabooyin badan oo aad ku fulin kartid nidaamka la doortay: dhammaystir, joojin, dib u bilaw, dib u bilaw, beddel mudnaanta, yareyso ama xoojiso, ka fiiri VirusTotal, iwm. Software wuxuu ururiyaa xogta ku saabsan CPU, GPU, RAM, I / O, disk iyo shabakad, wuxuuna soo bandhigaa isbedelada garaafyada wakhtiga dhabta ah. Sidoo kale Hawlgalka Explorer wuxuu kuu oggolaanayaa inaad aragto macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan habka gaarka ah.
Kormeerka hababka firfircoon
Maareynta Dhaqanka ee hababka
Eegida macluumaadka faahfaahsan ee ku saabsan hab gaar ah
Muujinta CPU, GPU, RAM, I / O xogta garaafyada
Soo dejisan Process Explorer
Faallo ku saabsan Process Explorer
Process Explorer Xirfadaha la xiriira